ကစားသမားများထပ်မံကျ 76 အတွက်အသက်ရှင်လျက် NPC ကိုတွေ့ - သတင်း - 2019
ထပ်မံကျ developer များအသက်ရှင် NPC နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဘို့အ 76 ကစားသမား banyat
ထပ်မံကျ 76 ခုနှစ်တွင်တိုက်ရိုက် Non-ဖွင့ ်. ဇာတ်ကောင်ကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့သည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိပိတ်ပင်ခဲ့။
သူတို့ရဲ့ဂိမ်းအတွက်ကုမ္ပဏီ Bethesda မကြာခဏဂိမ်းများ၏ထို့အပြင်ဘို့ပြင်ဆင်နေကြသူရှိရာစစ်ဆေးမှုများပစ္စည်းများနှင့်စက်ပြင်စမ်းသပ်မှုအခန်းတစ်ခန်းကိုအသုံးပြုသည်။ ထိုသို့သောနေရာများတွင်ထပ်မံကျ TES V ကို4တှငျတှေ့နှင့် console ကိုပညတ်တော်တို့ကို အသုံးပြု. နိုင်ပါသည်။ နိူးအွန်လိုင်းစီမံကိန်းကိုထပ်မံကျ 76 အတွက်အခန်းတခန်းထွက်ရှာကြရှိခဲ့သည်။
ကစားသမားများ Web ပေါ်ရှိ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနှင့်ပင်မကြာမီဖယ်ရှားပြီးခဲ့သည့် Youtube, ရန်ဗီဒီယိုစေပြီ။ အာဏာကိုလက်နက်အသစ်အရောင်အဖြစ်ပထမဦးဆုံးတိုက်ရိုက် NPC Vubi စမ်းသပ်နေရာများတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဒါဟာ developer များလွန်ကဲကဲ 76 အသက်ရှင်လျက်ထပ်မံကျ NPC လောကီသားတို့သည်အ populate လိမ့်မယ်ရှိမရှိမသိရ
ဦးတည်ရာကိုဇာတ်ကောင်အကြောင်းမရှိသေးပါလူသိများကား, မိမိကစားသမား developer များအနေဖြင့်တားမြစ်ပိတ်ပင်တယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့အခန်းထဲသို့တတ်နိုင်သမျှတရားဝင်လမ်းရ Bethesda တောင်းဆိုမှုများ, ဤတစျခုအရာဆိုလိုနိုငျသညျ - ဂိမ်းကစား cheat ကိုအသုံးပြုပါ။ ထပ်မံကျ 76 ၏ဖန်တီးသူသူတို့လုပ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲပုံကိုအကြောင်းကိုကစားသမားပြောပြရန်တောင်းဆိုမှုနှင့်အတူစမ်းသပ်တည်နေရာအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုရှာဖွေတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကစာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့သည်။ အဲဒီအစားသူတို့ unban နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။